Kufsigii laga wada ilmeeyay: 'Raggu waxay moodaan inaan nahay hantida dadweynaha' - BBC News Somali
Kufsigii laga wada ilmeeyay: 'Raggu waxay moodaan inaan nahay hantida dadweynaha'
Image caption Dadka jooga gudaha magaalada Hyderabad waxay sheegayaan inay intooda badan amni dareemayaan
Fal isugu jira kufsi iyo dil, oo magaalada Koonfurta Hindiya ku taalla ee Hyderabad loogu geystay gabar ahayd dhakhtaradda xoolaha, ayaa kiciyay caro weyn, waxaana su'aalo la iska weydiinayaa nabadgalyada dumarka.
Shacabka Hyderabad waxay subaxdii Jimcada kusoo tooseen war naxdin leh oo ku saabsan dil arxan darro ah: Meydka haweeney 27 jir ah oo la gubay ayaa laga helay buundo ay baabuurtu dul-maraan hoosteed, taasoo ku taalla meel ka yara baxsan magaalada.
Laakiin galinkii dambe ee isla maalintaas ayey boolisku shaaciyeen inay aaminsan yihiin in gabadha lagu kufsaday wadar, ka dibna la dilay, inta aan dabka la qabadsiinin ka hor.
Afar nin ayaa la xiray iyagoo dambigaas lala xiriirinayo.
Dhinaca kale, argagaxa iyo carada ka dhalatay falkaas ayaa horseeday dibadbaxyo - saddex askari oo ka tirsan booliska, oo lagu eedeeyay inay daawiyeen diiwaangalinta kiis ku saabsan qof la weysanaa, ayaa shaqada laga joojiyay wasaaradda arrimaha gudaha ee ismaamul goboleedkana waxay codsatay in dacwaddan lagu qaado maxkamad deg deg ah, si durbaba go'aankeeda loo soo saaro.
Hase ahaatee, kiiskan wuxuu sidoo kale kiciyay dood ah - sidey nabadgalyo u tahay magaalada Hyderabad?
'Waan la qabsannay cabsida'
"Waligeyba nabadgalyo ayaan dareemi jiray marka aan ku dhex socdo magaalada, balse dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa si lama filaan ah u imaanaya. Waxay tani sidoo kale noo tahay baraarujin la xiriirta inaan feejignaanno, laamaha amnigana ku xirnaanno", sidaas waxaa tiri Padmaja Rao, oo 31 jir ah.
"Mar walba nabadgalyo ayaan dareemayay marka aan ku safrayo magaalada Hyderabad. Waxaan xilliyo kala duwan ka shaqeeyaa shirkad gaar loo leeyahay, waligeyna amni darro ma dareemin, xitaa marka aan wakhtiga habeenkii ah shaqeynayo", sidaasna waxaa tiri Tamoli Das, oo 33 jir ah.
"Laakiin waan dhihi karaa amni ma dareemayo marka aan ku safrayo magaalada duleedkeeda, ama meelaha aysan dadku ku badneyn", ayey kusii dartay hadalkeeda.
Ciidamada booliska ayaa aaminsan in gabadha la kufsaday, lana dilay - oo aan magaceeda loo sheegi karin sababo xagga sharciga ah awgood - lagu weeraray meel ka mid ah duleedka magaalada, halkaasoo ay dano kasoo fushaneysay.
Magaalada Hyderabad, oo ay ku nool yihiin dad ka badan 8 milyan waxay aad uga sii ballaaraneysaa duleedyada, maadaama ay shacabka kusii badanayaan.
Gabadh nolosha lagu gubay markii ay nin murmeen
Magaalo ay adag tahay in maydadka Soomaalida loo helo meel lagu xabaalo
Image caption Dhimashada gabdha 27 jirka ah ayaa ka careysiisay kumannaan haweenka Hindiya ah
Waxaa magaaladan si joogto ah uga dhaca faldambiyeedyada ay ka mid yihiin kufsiga iyo dilalka loo geysto haweenka iyo gabdhaha yar yar.
5.6% ka mid ah dambiyada laga soo tabiyo hindiya waxay ka dhacaan magaaladan.
Inkastoo ay falalka dambiyada ee ka dhaca magaaladan ay ka yaryihiin magaalooyin badan oo kale, haddana waxaan lasoo tabinin badanaa dambiyada dhaca ee noocaas ah.
Dumarka da'da yar ee ku nool Hyderabad, way kasoo horjeedaan in magaaladooda lagu tilmaamo mid xun, taas baddalkeedana waxay eedda saarayaan ragga oo kaliya.
"Waxaan xasuustaa sanadkii 2017-kii, in annagoo dhowr gabdhood ah oo baaskiillo wadanna ay na hareereeyeen rag mootooyin wata, way na cabsi galiyeen iyagoo na handadaya oo lagu maadeysanaya", ayey tiri Parineetha Madna, oo ah 29 jir caafimaadka ka shaqeysa.
Image caption Mid ka mid ah haweenka ayaa BBC-da u sheegtay in dhibku uusan ahayn magaalada, balse uu yahay ragga
Waxay sheegtay in nasiib wanaag markaas ka dib ay arkeen boolis roondo sameynayay, ayna caawinaad ka heleen.
Haween kale ayaa BBC-da laanteeda Telogu u sheegay in meelaha ay khatarta ugu badan ku wajahaan ay yihiin goobaha lagu sugo gaadiidka dadweynaha.
"Waxaan soo iibsaday gaari aan safarradeyda u adeegsado, maadaama aanan nabadgalyo ku dareemeynin gaadiidka dadweynaha, mootooyinkana wayba kasii daran yihiin. Laakiin raggu waxay xitaa kugu qashqashaadi karaan gaarigaaga dhexdiisa", ayey tiri Samyukta, oo 31 jir ah.
"Hyderabad ma aha dhibaatadu, balse waa ragga u maleynaya inay dumarki yihiin hanti dadweyne. axaan la qabsannay inaan si joogto ah u cabsanno. Aan wax ka qabanno fikirkaas ku jira ragga, ka hor inta aynaan magaalada eedeynin", ayey tiri.